Ny mpahay matematika kajy ny vidin-bitcoin for 2018 - Blockchain News
Janoary 25, 2018 Admin
Price ny Bitcoin for 2018
Janoary 22, mpampiasa Medium Joel Lopez Barata namoaka lahatsoratra: “I kajy ny vidin-bitcoin ho an'ny taona iray manontolo 2018. Dia tsy hino ny vokany! “Ny disclaimer” izao no heviny fotsiny, Tsy filan-kevitry ny fampiasam-bola. ” Ny matematika Lopez kajikajy dia mifototra amin'ny ny petra-kevitra fa ny fitondran-tena ny bitcoin amin'ny ho avy dia mifanitsy ny fitondran-tenany tamin'ny lasa. Raha izany dia, Lopez dia mihevitra bitcoin “salama vola”, ary Fiat – tsy misy: “Ny hoavy soa ho mitovy amin'ny farany, raha ny ankamaroan'ny olona mahatakatra fa bitcoin vola no tsara indrindra.”
Ny Lopez simulation dia miorina amin'ny Monte Carlo fomba. Izany no isan-karazany ny kajy amin'ny solosaina, algorithms izay miantehitra amin'ny kisendrasendra miverimberina santionany. Raha izany dia, Lopez dia mampiasa ny dolara isan'andro soa avy amin'ny bitcoin mba hahatakatra ny zavatra vidiny ny tokotokony ho amin'ny faran'ny 2018.
Mba kajy ny tombom-barotra isan'andro, dia mizara ny vidin'ny bitcoin amin'izao fotoana izao ny saran'ny ny andro farany, ary subtracts ny vondrona: “Rehefa niresaka momba an'i Monte Carlo simulation amin'ny fitantanam-bola, isika dia mihevitra fa ny ho avy ny fitondran-tena vidin-pananana dia ho toy izany koa ny amin'ny fitondran-tena taloha, ary mamorona be dia be ny dikan-kisendrasendra io ho avy , izay fantatra amin'ny matematika toy ny “kisendrasendra tongotra”. Ny fehezan-dalàna ho an'ny famoronana manontolo izany simulation tsy ampy amin'ny GitHub.
Hanorina kisendrasendra mandeha tsirairay modely ao amin'ny simulation, tsy maintsy maka kisendrasendra isan'andro santionany ny tombom-barotra avy 2010 ho amin'izao fotoana izao, manampy azy ireo ary avy eo dia hahamaro cumulatively mandra-Desambra 31, 2018. Aorian'izay, ny vidin-bitcoin amin'izao fotoana izao dia maro ny zava-dehibe ny kisendrasendra mandeha, ary ny vokany dia simulation ny ho avy vidiny. Zavatra tokony hatao im-betsaka (raha izany dia – 100,000 fotoana), ary ny faran 'ny taona ho hitantsika ny vidiny farany kisendrasendra fizarana tsirairay mandeha.
Ny voalohany 200 ny 100,000 kisendrasendra mijery tongotra toy izao:
Raha ny fandehany fa ny farany indrindra vidin'ny kisendrasendra mandeha tandavan avy $ 10,000 ny $ 100,000. Ny sary manaraka dia mampiseho ny fizarana farany vidin-javatra ho an'ny rehetra 100,000 kisendrasendra tongotra:
Izany dia mampiseho fa ny tena vidiny mety miovaova eo $ 24,000 ary $ 90,000. Mba hahatakarana izany marina kokoa, misy fomba maro. voalohany, dia afaka manao kajy fotsiny ny 50% -faha-percentile ny fitsinjarana ny vidiny farany. Ho mitovy amin'ny $ 58,843. Fomba iray hafa dia ny kajy hakitroky ny mety mampiasa ny asa tombana hakitroky nokleary ary hahita ny vidiny mifanaraka ny ambony indrindra izany asa – $ 55,530.
Saingy tsy izany no farany pamantarana, dia mbola tsara kokoa ny mampiasa azy io mba hahita ny toky elanelam-potoana io. Fa ny bitcoin vidiny, ny 80% matoky elanelam-potoana io dia ho $ 13,200 – $ 271,277. Manondro ihany koa izy fa ny vintana fa amin'ny faran'ny taona ny vidiny dia ho eo ambany $ 13,200 dia mitovy toy ny vintana fa dia ho ambony $ 271,277.
Ary ny nokleary hakitroky tombana fantatra, azo atao ny manao kajy ny mety fa ny vola lany ny bitcoin ho ringana amin'ny faran'ny taona iray momba ny mpanondro. Manokana, ny mety fa ny vidiny dia ho ambany na mitovy ny haavon'ny Janoary 20 ($ 12,000), dia 9.84%.
Iza no nanao ny anjara lehibe indrindra ho an'ny orinasa crypto? Top 7
An'arivony tapitrisa dolara Wall Street orinasa nanomboka tamin'ny Bitcoin raharaham-barotra tamin'ny herintaona
Jane Street, ny secre ...
Previous Post:Fanafihana mitam-piadiana adidiko ny Canadian Crypto Exchange
Next Post:Blockchain News 26 Janoary 2018